मास्टर्स को म्याजिक मास्टर्स को म्याजिक
हामी असम्भव महसुस गर्न मानिसहरू, कम्पनीहरू र संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दछौं। कसरी?
कोचिंग पाठ्यक्रमहरूको साथमा रोजगारीको जीवनमा असंभव महसुस गर्न शिक्षण सोच्न रणनीतिहरू। वा तपाईंको लागि शानदार, असाधारण असंभव संचार घटनाहरू उत्पादन गर्दै।
घटनाहरु र संचार
मास्टरर्स म्याजिकले ग्राहकलाई संचार आवश्यकताहरू पूरा गर्न महान अनुकूलित प्रत्यक्ष शो सिर्जना गर्दछ। शो सन्देशहरु र कलाकारहरु को संचार को एक माध्यम हो, संचार को संकेतक।
प्रत्येक कलाकारसँग एक भावना सम्बद्ध छ।
हरेक भावना ब्रान्डको मान।
असम्भव बनाउन सकिंदैन। र मजाक मेसर्सले यो गर्न को लागी विधिशास्त्रलाई सिकाउँछ। मनोचिकित्सक मटेटो रैंम्पिन द्वारा सोचेको पूल द्वारा विकसित, सोच स्टेनरेन्ज® फिलासो, एक ठोस वैज्ञानिक आधार छ जसले प्रशिक्षण सन्देशहरूलाई वास्तविक क्षण मनोरञ्जनको माध्यमबाट प्रसारित गर्दछ, ग्राहकको आवश्यकताहरुमा विज्ञापन कोष बनाइन्छ।
मास्टर्स म्याजेले पछिल्लो एक्सएनएनएक्सएक्सको मेटाइसियस र स्काईमा इटालीमा प्रसारण गरेको सबै प्रमुख जादुई कार्यक्रमहरू सिर्जना, उत्पादन र एहसास गरेको छ। परास्नातक जादू कार्यक्रमहरू सधैं सञ्जाल साझेदारी भन्दा बढी छ, यसको दर्शन को सफलता को पुष्टि : अद्वितीय र अभिनव शो सिर्जना गर्न जादुई कला को हजारौं को नवीकरण। जनताबाट ठूलो प्रतिक्रियाले देखाउँदछ कि जब जादू सर्वोत्तम प्रस्तुत गरिन्छ, यसले चकित र उत्तेजित गर्दछ।
सीएनएच - परिवर्तन पावर हो
प्रशिक्षण - मानसिक कोचिंग लाइभ शो - परिवर्तन शक्ति हो
एक अद्वितीय प्रकारको शोको लागि 1 बिलियन अनलाईन भिजुअलहरू भन्दा बढी ...
प्रत्यक्ष घटनाहरू - ठूलो शो
मास्टर्स को जादू 2016
विश्व जादू चैंपियन च्याम्पियनशिप, पेशेवर जादुगरहरूले सबैभन्दा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार ...
IULM - शैक्षिक वर्ष उद्घाटन
वाल्टर रल्फो, अन्तिम6वर्षमा प्रशिक्षणमा तीव्र सफलता थियो ...
प्रशिक्षण - मुख्य बोट बोल्ने
राइभा डेल सोल - डैनागिक
3 असाधारण इटालियन प्रतिभाहरु सपना र जादुई को बीच एक शो को लागि
प्रत्यक्ष घटनाहरू - कम्पनी घटनाक्रमहरू
यो सम्भव छ ... एक साँझ सिर्जना गर्न को लागी कम्पनीको मुख्य व्यवसाय को तत्व हो ...
MAW - पारंपरिक रात
यो सम्भव छ ... एक साँझमा र एक एकल विषयवस्तुमा संलग्न गर्न को लागी उत्कृष्टता ...
अमेरिकाको साथ अनुमोदन गर्नुहोस्
प्रयोगकर्ता नाम बिर्सनुभयो?
हाम्रो व्यावसायिक प्रस्तावहरू पत्ता लगाउन आरक्षित क्षेत्र पहुँच गर्नुहोस्